Olee otú ikpochapụ Internet akụkọ ihe mere eme na-adịgide adịgide na otu click
> Resource> Ihichapu> Olee otú iji Kọwaa Internet History-adịgide adịgide na 1 Pịa
Nzuzo dị ezigbo mkpa maka onye ọ bụla, na ọ bụ manụ ma ọ bụrụ na nzuzo gị leaked si ma ọ bụ onye zuru ya, ọbụna na-agbasa ya. Ma, ị maara? Mgbe ụfọdụ nzuzo gị ntapu si site onwe gị, na ị dị nnọọ na-amaghị. Kedu? Site na Internet akụkọ ihe mere eme. N'ezie oge ọ bụla ị na-eji kọmputa, nchọgharị gị na-akpaghị aka na-echekwa ozi na ị na-ịnweta dị ka a akụkọ ihe mere eme ndekọ, dị ka Internet cache, kuki, ibe weebụ, nbudata ndepụta, na ọbụna aha njirimara na okwuntughe. Mgbe ị gara na ha oge ọzọ, nchọgharị ga-anabata unu site na akụkọ ihe mere eme log na obere oge. Ya mere nwere ike ị chọrọ ikpochapụ Internet akụkọ ihe mere eme maka nzuzo ihe.
The mfe ụzọ ka ihichapụ Internet akụkọ ihe mere eme na nanị 1 click
N'agbanyeghị na ọ bụ Internet cache, kuki, nbudata ndepụta, na ọ dịghị mkpa ị na-eji Internet Explorer ma ọ bụ Firefox nchọgharị, niile akụkọ ihe mere eme na ndekọ nwere ike sụrụ kpamkpam na-adịgide adịgide. Ihe ị chọrọ bụ a akụkọ ihe mere eme Cleaner. Ebe a ka na-Wondershare 1-Click PC Care dị ka ihe atụ.
Nke a mere eme Cleaner ga-akpaghị aka iṅomi mata ẹdude nsogbu na gị PC, na n'ịwa yiri akụkọ maka ọ bụla ihe. On akụkọ ị nwere ike nweta ịlele ndepụta gị dịịrị nanị onwe onye dị ka foto dị n'okpuru ebe:
The metụtara banyere ihe omume gị na Internet Explorer, gị usoro na ngwa na-depụtara na nkọwa. Na e yiri ndụmọdụ maka ị na-eme na ha. Ihe kasị mma bụ na, ị na-adịghị mkpa ikpochapụ ha otu otu si gị Internet Explorer ma ọ bụ Firefox nchọgharị, naanị otu click nke "Idozi Ugbu a" button kama. Mgbe ahụ a nile akụkọ ihe mere eme ndia na-kpam kpam ehichapụ ma gị Internet Explorer na Firefox nchọgharị. Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa na-emeghe nchọgharị gị. Ọ dịghị onye nwere ike ịhụ gị onwe ozi ugbu a.
N'ezie, i nwere abụghị naanị ehichapụ Internet akụkọ ihe mere eme na nke a click. Mgbe ibidogharịa kọmputa gị, ị ga-ahụ na kọmputa gị na-agba ngwa ngwa karịa tupu. N'ihi gịnị? 1-Click PC Care Ka scanned na ofu ọzọ exiting nsogbu na kọmputa gị na dịgodị, dị ka ndekọ nchebe igbochi gị ndekọ n'ebe obi ọgụ, Trojan ọgụ na virus ọrịa, mbo mbuli gị PC arụmọrụ, kwụsie ike na nche. Naanị otu click, i nwere ike igosi dị ka a na kọmputa ọkachamara Iji biaghachi azụ gị na kọmputa na mbụ ọnọdụ.
Otu Pịa na nkwado ma weghachite Ma OS na Android SMS